Uthotho lweeNtloko zoKhathalelo lweSanitary
I-10L yokuhamba okuphezulu okuphezulu kwe-oxygen concentrator kwisitokhwe ngoku
I-10L yokuhamba okuphezulu okuphezulu kwe-oxygen concentrator kwisitokhwe ngoku Iintsuku, ukunqongophala kwe-10L oksijini yokugxila kuye kwaba kubi ngakumbi nangakumbi. Sebenzisa intengiso ye-adsorption yesisefo seemolekyuli, ngomgaqo womzimba, kunye nesiguquli esikhulu sokuhambisa ioyile njengamandla, initrogen emoyeni ...Funda ngokugqithisileyo »
I-10L i-oxygen concentrators inesitokhwe ngoku.
Ixesha lokuposa: Aug-10-2021
I-10L i-oxygen concentrators inesitokhwe ngoku. Ngoku iintsuku iindawo ezininzi zinqongophele kwi-oxygen concentrators kwaye ii-odolo ezingakumbi nangakumbi ziya kumzi mveliso wamaTshayina. Njengoko abathengi ngakumbi nangakumbi bayathontelana ukuya eTshayina, ixesha lokuhambisa lomvelisi weoksijini waseTshayina liya lisiba lide. Ngoku ixesha lokusiwa kweoksijini ...Funda ngokugqithisileyo »
Emva kokuqhuma kweoksijini eGangapur, eRajasthan, umfazi wabulawa kwaye umyeni wakhe ekwimeko embi
Kuyavela ukuba ukusetyenziswa kwesingxusi seoksijini esingasebenzi kakuhle sisibini esikwisiXeko saseGangapur, eRajasthan kwakubulala ngenxa yokuba esi sixhobo saqhushumba xa sasivuliwe. Unkosikazi usweleke kwaye umyeni wenzakele kakhulu kule ngozi. Esi siganeko senzeke kwisithili sase-Udaimol eGangapur. A ...Funda ngokugqithisileyo »
Uthini umahluko phakathi kweKN95 kunye neMK90 mask?
1. Amabakala ahlukeneyo. Imaski ye-KN90 inenqanaba elisezantsi lokukhuselwa kwe-particle engeyiyo i-KN95. 2. Ukusebenza kokuhluza okwahlukileyo. Imaski ye-KN90 inokucoca ngaphezulu kwe-90% yemicimbi yamasuntswana; Imaski ye-KN95 inokucoca ngaphezulu kweepesenti ze-95 zento ethile. 3. Ukungena komoya okwahlukileyo. Ukuziphatha ...Funda ngokugqithisileyo »
Ezinye iingcebiso zonyango lweemaski zobuso noluntu
Ezinye iingcebiso zonyango lweemaski zobuso noluntu 1.Ingaba imaski inokuhlanjwa kwaye iphinde isetyenziswe? Andikwazi! Iimaski ngokubanzi lilaphu elingalukanga + umaleko wokucoca ulwelo + ulwakhiwo lwelaphu elingalukanga. Icebo lokucoca ulwelo embindini kufuneka ligcinwe lomile ukuze lithembele kumbane we-adsorption we-electrostatic, ke amayeza ...Funda ngokugqithisileyo »
Kutheni iimaski zithintela ukusasazeka kwintsholongwane?
Kutheni iimaski zithintela ukusasazeka kwintsholongwane? Luhlobo luni lwezinto eziphathekayo? Sihlala sisithi iimaski zenziwe ngamalaphu angalukwanga. Amalaphu angalukwanga ziindwangu ezingalukwanga, ngokuchasene namalaphu alukiweyo, enziwe ngemisonto ejolise kuyo okanye engahleliyo. Xa kuziwa kwimaski, ...Funda ngokugqithisileyo »
Intengiso yeHlabathi yeNtengiso yeAtomizer kwi2021: Uhlalutyo lweSWOT lwabaqhubi abaphambili beCAGR Value Growth | Iintlobo eziPhezulu: Ukhathalelo lwezeMpilo lwePhilips, ukhathalelo lwezeMpilo lwe-Omron, iiMveliso zezeMpilo zeGF…
Ingxelo yophando lwamva nje kwimakethi ye-atomizer ye-meshizer yomhlaba ibonelela ngophando oluqokelelweyo kuqhambuko lwe-COVID-19 ukubonelela ngolwazi lwamva nje kwiimpawu eziphambili zentengiso ye-mesh atomizer. Ingxelo yezobuntlola iqulethe uphando olusekwe kwiscena sangoku ...Funda ngokugqithisileyo »
Akukho Mida, Inc. Yazisa ngokusungulwa ngempumelelo kweMediDent
I-ORIENTMED, AZ, ngoFebruwari 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - ngeNewMediaWire -Ayikho iMida, Inc. ixhasa isitofu sokugonya sesizwe saseMelika ...Funda ngokugqithisileyo »
I-ORIENTMED inokunika ukuhanjiswa okufutshane kwisirinji ye-1ml
I-ORIENTMED iyandisile umgca wayo wokuvelisa isirinji ye-1ml. Umthamo wemveliso uphindaphindwe kabini. Nangona ishedyuli yemveliso igcwele ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, i-ORIENTMED ithembisa ukuba xa umthengi ebeka iodolo, iya kunika kuqala umthengi ukuba ahambise i-syr ye-1 yesigidi ...Funda ngokugqithisileyo »
I-ORIENTMED igqibile nge-1ml luer yokukhiya umgca wokuvelisa
Ngomhla wokuqala ku-Matshi 1st, i-ORIENTMED iphelise umgca wayo wokuvelisa isirinji ye-1ml. Ngophuhliso lwangoku lwesifo sehlabathi, imfuno yezitofu zokugonya iyanda. Kukho imfuno ekhulayo yesirinji, ngakumbi isirinji eyi-1ml. Ukuphendula ukukhula okuphambeneyo kwimfuno yesirinji, ORIENTMED ...Funda ngokugqithisileyo »
Intshayelelo ekusebenziseni kobuqhetseba kwe-1mL yesirinji engenazintsholongwane
Ixesha Post: Feb-19-2021
Intshayelelo ekusetyenzisweni kobuqili be-1mL yokutshabalalisa ngokuzenzekelayo iSirinji (izifo ezingasasebenziyo) Ngophuhliso lwezenzululwazi yezonyango, isirinji engenakubonwa isetyenziswa kakhulu eklinikhi. Isirinji esilahlayo eyi-1mL ayisetyenziswanga rhoqo (kuvavanyo lolusu kunye nokufaka inaliti), kodwa ...Funda ngokugqithisileyo »
Uthini umgaqo wenano spra gun?
Ixesha Post: Feb-06-2021
Uthini umgaqo wenano spra gun? Inkcazo yetekhnoloji yeatomization kukuthatha i-DU kwaye isebenzise i-transducer ye-ultrasonic, ekwabizwa ngokuba sisiciko, xa isekethe iqhuba isonkana esisicaba, isibhambathiso esingcangcazelisayo, amanzi angaphezulu kokungcangcazela abe ngamasuntswana amancinci, ububanzi bawo ...Funda ngokugqithisileyo »
I-HEBEI YOKUFUNA UKUTHENGA NOKUTHUNYELWA KWENKQUBO., LTD
I-10L yokuhamba okuphezulu okuphezulu kwe-oxygen concentrator ...
I-10L yokuhamba okuphezulu okuphezulu kwe-oxygen concentrator kwisitokhwe ngoku Iintsuku, ukunqongophala kwe-10L oksijini yokugxila kuye kwaba kubi ngakumbi nangakumbi. Sebenzisa intsebenzo ye-adsorption yesisefo seemolekyuli, ngomgaqo womzimba, kunye nesiguquli esikhulu sokuhambisa ioyile njengamandla, i-nitrogen emoyeni nokwahlukana kweoksijini, kwaye ekugqibeleni ufumane uxinzelelo oluphezulu lweoksijini. Olu hlobo lomvelisi weoksijini luvelisa ioksijini ngokukhawuleza, uxinzelelo lweoksijini luphezulu, lulungele zonke iintlobo zabantu ioksijini ...
I-10L i-oxygen concentrators inesitokhwe ngoku. Ngoku iintsuku iindawo ezininzi zinqongophele kwi-oxygen concentrators kwaye ii-odolo ezingakumbi nangakumbi ziya kumzi mveliso wamaTshayina. Njengoko abathengi ngakumbi nangakumbi bayathontelana ukuya eTshayina, ixesha lokuhambisa lomvelisi weoksijini waseTshayina liya lisiba lide. Ngoku ixesha lokuhambisa lomvelisi weoksijini ziintsuku ezingama-15-45. Inkampani yethu iphumelele ukwanda kwemveliso ngokuhlaziya imveliso. Ngoku kukho malunga neeyunithi ezingama-270 kwisitokhwe rhoqo ngenyanga. Nceda ujonge kwezi nkcukacha ...
60mm Petri Dish, Kn95 Banokubulawa ubuso imaski, Iikiti zovavanyo lokukhulelwa, Iziqhano Alahlwayo zilahlwe Powder Free, Kwisixhobo Auto Cover yezihlangu, Isiciko sezihlangu kwezonyango,